Nwụrụ Anwụ-End Guy grips Manufacturers na Suppliers | China Dead-End Guy grips Factory
Jera emepụta preformed Ihọd oyiyi akwa maka iferi na gwara mmanụ efefe cable eduzi.
Kasị ụdị Helical akara kwesịrị ọzọ a na-akpọ preformed akara ngwaahịa bụ: nwụrụ anwụ-ọgwụgwụ Ihọd grips. Guy adịgide nwụrụ anwụ-nsọtụ-eji na elu ma ọ bụ osisi okporo osisi na-ewu nke nkesa na netwọk. Nwụrụ Anwụ-ọgwụgwụ Ihọd grips na-mere nke otu ihe onwunwe dị ka-eduzi ha nke ha tinye ha n'ọrụ, aluminum, ọla kọpa, kpaliri ígwè
N'ozuzu Dead-ọgwụgwụ Ihọd grips ike ga-eji na eletriki ike nkesa ma ọ bụ na-efefe n'elu Telecommunication netwọk fixate ADSS na OPGW eriri optic Gịnị ogwe osisi na elu.
The grips na-bu n'obi ejigidesikwa efefe eduzi ma ọ bụ ichebe Ihọd Strand nke osisi. The pụrụ iche, onye-ibe imewe enweghị ihe ọ bụla bolts ọ bụ elu-nrụgide na-ejide ngwaọrụ ekwe nkwa mfe echichi na ogologo ndụ oge nke Preformed Helical mwekota Dabara Adaba.
Jera bụ ike ịzụlite nwụrụ anwụ-ọgwụgwụ Ihọd waya grips dị ka gị cable nkọwapụta.
All anyị waya kpụrụ nwụrụ anwụ nsọtụ a nwalere na mmekota nke ọkụ eletrik na Telecommunication ụlọ ọrụ iji mezuo obodo chọrọ nke anyị ahịa. Ọzọkwa, Jera nwere zuru ezu nso nke ule owuwu n'ihu ule nke helical wires.
Kwa ụbọchị anyị na-na-rụọ anyị ngwa iji nweta ịma aka ndị ọhụrụ nke zuru ụwa ọnụ eletriki na netwọk na-ekesa ahịa.